Madaxweynaha Deegaanka Oromia: Soomaali iyo Oromo waa walaalo isku dhiig ah - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweynaha Deegaanka Oromia: Soomaali iyo Oromo waa walaalo isku dhiig ah
Sannad ka hor, 4tii August, magaalada Jigjiga waxaa ka dhacay rabshado u dhexeeyay Soomaalida iyo Oromada oo sababay dhimashada dad badan oo isugu jiray labada dhinac.
Colaadaas waxay ku faaftay deegaannada Soomaalida iyo Oromada. Rabshadaha waxay salka ku hayeen arrimo la xiriira xuduudaha labada qowmiyadood wadaagaan iyo daaqa. Kumannaan qof oo labada dhinac ka barakacay ayaa weli ku nool xeryo.
Waxaa xilligaas rabshadaha loo arkayay in labada dowlad-deegaan ee Soomaalida iyo Oromada ayaa midba midka kale ku eedeeyay dhibaatadaas.
Balse hadda si khilaafka xal loogu helo, sannad ka dib, waxaa Jigjiga isugu tagay ergooyiin labada dhinac ka socdo oo ka badan 1400 oo qof.
Waxaa sidoo kale ka qeybgalay labada madaxweyne ee Deegaannada Soomaalida iyo Oromada ee Itoobiya.
“Iskudhicii dartii waxaa jirto in labada dhinacba ay dad ka barakeceen. Laakiin xaaladdii dareenka lahayd ee abuurantay in ay barakaceen way degtay,” ayuu yiri Madaxweynaha Deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya, Mustafe Muxumed Cumar.
Waa arrinta ugu badan ee Jigjiga laga hadal hayo ee ah xilliga dadkaas dib ay ugu kala noqonayaan guryahoodii ay ka soo barakeceen.
Madaxweyne Mustafe ayaa sheegay: “Waa in hadda loo guntado sidii dib loogu celin lahaa meelihii ay ka soo barakeceen. Labada dhinacba waa inaan taas ka shaqeyno. Natiijo fiicanna waan ka gaarnay hadda, maanta midnimada iyo is jaceylka aan aragno waa in ayno sii wadno. Anigoo ku hadlaya magaca Soomaalida ayaan arrintaas ballan ku qaadayaan.”
Xilligii ay rabshadaha socdeen waxaa la gubay hanta badan, waxaana la isu geystay dhibaatooyiin dil iyo dhac. Xiisadihii Jigjiga waxay sababeen in la gubo xarumo ganacsi iyo guryo.
Rabshadahaas waxay dadka qaar aaminsan yihiin in ay qeyb ka ahaayeen arrimihii sababay in isbedel degdeg ah uu ka dhoco gobolka Soomaalida.
“Waxay ahayd xaalad aad u cakiran oo sababtay in ay kala guuraan dad muddo isla noolaa”, ayuu yiri mid ka mid ah odayaashii ka qeybgalay kullanka ay ergooyiinka isugu yimaadeen ee Jigjiga ka dhacay.
Goobihii isku dhacyada ku burburay ee Jigjiga ayaa dib loo dhisay, Laakiin saameynta weli waalaga dareemayaa bulshada dhexdeeda.
Madaxweynaha dowladda deegaanka Oromia, Shimeles Abdissa, ayaa isku deyay inuu afsoomaali kula hadlo ka qeybgalayaashii, ereyadii uu isticmaalay waxaa ka mid ah “Soomaali iyo Oromo waa isku mid; Oromo iyo Soomaali waa isku dhiig; Soomaali iyo Oromo waa walaalo”.
Shimeles Abdissa ayaa yiri: “Dhibaatada u dhaxeysa dadkan deriska ah, si loo xalliyo waxaan u mareynaa dhaqanka iyo wadahadal. Waana hab taariikhi ah oo soo jireen ah oo aan sii wadi doonno. Waa in aan adkeyno dhaqanka iyo labada shacab midnimadooda. Waa inaan ku dadaalno sidaan meel sare u gaarsiin laheyn arintaas.”
Colaadda waxay sababtay in safaradii dhulka ee labada dhinac ay kala go’aan, sidoo kale waxaa xirmay jidka Addis Ababa iyo Jigjiga isku xira. Qaar ka mid ah dadkii kullanka ka qeybgalay ayaa sidan qaba.
Sacdo Mahad Cabdi oo rabshadaha ka hor ka soo noqotay qurbaha ayaa sheegtay in heshiiska iyo kullankan ay u aragto guul “u soo hooyatay” labada qowmiyadood.
“Caqabadihii jiray waxaa ka mid ah dil iyo jidkii Addis Ababa oo xirnaa. Waxaan filayaa inuu furmo”, ayey tiri.
Maxamed Cabdi Gamaadiid oo ka mid ah dhallinyaradii kullanka qeybta ka ahaa ayaa sheegay in “ay soo noqotay walaaltinimadii Soomaalida iyo Oromada. Waa mid fiican in la soo celiyo wada socodkoodii”.
Weli macadda sida looga heshiiyay khilaafka dhanka xuduudaha iyo deegaannada la isku hayay ee salka u ahaa rabshadaha.
Gabar ka mid ah qowmiyadda Oromada oo shirka nabadda ee Jigjiga ka qeybgashay ayaa sheegtay “Waa maalin nagu abuurtay farxad wayn, midnimada Soomaali iyo Oromo waa mid ku saleysan dhaqanka iyo dhiigga ay wadaagaan.”
“Waa walaalo, Waa caruurta hal waalid. Oromada iyo Soomaalida hooyo keli ah baa wada dhashay. Dad baa ina kala geeyay, haddana dib baan isugu soo noqoneynaa, midnimadeena ayaan adkeyneynaa, dhaqankeena baan sare u qaadeynaa. Walaaltinimadeena baan xoojineynaa.”